I-SARS-CoV-2 yovavanyo lwe-Antibody Strip-SARS-CoV-2 yoVavanyo lweeMveliso-iSinocare
I-SARS-CoV-2 Strip yovavanyo lwe-Antibody
I-Sinocare SARS-CoV-2 Antibody Test Strip yindawo ekhawulezileyo, echanekileyo necacileyo yokhathalelo lwe-IgM-IgG edityanisiweyo yovavanyo lwe-antibody kit, isebenzisa i-lateral flow immunoassays, enokufumana ngokufanelekileyo ii-antibody ze-IgM kunye ne-IgG ngaxeshanye ngokuchasene ne-SARS-CoV-2 virus egazini lomntu ngaphakathi kwemizuzu eli-15 ukuya kwengama-20.
(I-CE iphawulwe, i-FDA iyeza kungekudala!)
Ixesha lokuthintela intsholongwane liza kuba malunga neentsuku ezi-0 ukuya kwezi-10, i-IgM inokufunyanwa malunga neentsuku ezisi-7 emva kokuqala, i-IgG iya kuvela malunga neentsuku ezili-10 emva kokuqala.
1.Li Ping, Li Zhiyong, isifundo sokuqala se-serum 2019-nCoV IgM kunye ne-IgG antibodies ekuchongeni iNovel Coronavirus Pneumonia, Chaza njengeChin J Lab Med, 2020,43, DOI: 10.3760 / cma.j.cn114452-20200302- 00155
2.Xu Wanzhou, Li Juan, Ixabiso lokuchonga ngokudibeneyo kwe-serum IgMand IgG antibodies ukuya kwi-2019-nCoV kwi-2019-nCoV usulelo, Chaza njengeChin J Lab Med, 2020,43, DOI: 10.3760 / cma.j.cn114452- 20200223-00109
Ngokukhawuleza ukufumanisa Elula umsebenzi
Intsholongwane yenoveli, ngoku eyaziwa njenge-SARS-CoV-2 (ekwabizwa ngokuba yi intsholongwane), Intsholongwane ye-RNA yosapho lwe-beta coronavirus. Uvavanyo lwe-IgM-IgG oludibeneyo lwe-antibody lulungele ukuxilongwa ngokukhawuleza kunye nokuvavanywa kwesixa esikhulu sezigulana ezikrokrelwayo kunye neziphethe i-asymptomatic carriers ukuthintela usasazo lwesibini kunye nokuqinisekisa unyango olufike ngexesha elifanelekileyo losulelo.
Uvavanyo lwe-RT-PCR yeNyukliya yeAcid
Uvavanyo lwe-IgG-IgM Antibody
Igazi elipheleleyo / iSerum / iPlasma
Ngaphezulu kweeyure eziyi-2-3
Kwimizuzu eli-15 ukuya kwengama-20
Izixhobo ezithile ziyafuneka
Ukuthambekela kokungalunganga kobuxoki
Uvavanyo lwe-IgM-IgG ngaphezulu kwe-90%
Ezothutho / zoGcino
Ifuna intambo ebandayo
1. Uvavanyo lwezonyango
Uvavanyo lulonke kwizifundo ezingama-320, kubandakanya abaguli abangama-240 ababandakanyiweyo, abaguli abangama-60 abaqinisekisiweyo kunye nezigulana ezingama-20 eziphilisiweyo.
Iserum / iPlasma
Inqanaba lesalathiso esingalunganga sokudibana (- / -)
Isalathiso esifanelekileyo senqanaba lokudibana(I+ / +) U
Efanelekileyo inkqubo & Veyedwa siphumo
1. Yintoni i-SARS-CoV-2 kunye Virus?
Intsholongwane yenoveli, ngoku eyaziwa ngokuba yi-SARS-CoV-2, yintsholongwane ye-RNA yohlobo lwe-b inoveli ye-coronavirus, ephethe ubhubhane wehlabathi. I-SARS-CoV-2 ibangela esi sifo sithiywe igama Virus.
2. Yintoni iSinocare SARS-CoV-2 test strip?
Yimigca yovavanyo edityanisiweyo ye-IgM-IgG, isetyenziselwa ukufumanisa ngokufanelekileyo i-IgG kunye ne-IgM antibodies yenoveli coronavirus kwi-serum yabantu, iplasma okanye igazi elipheleleyo kwi-vitro.
3. Ngaba kufuneka ndenze uvavanyo lwe-SARS-CoV-2?
Ingasetyenziselwa ukuhlolwa ngokukhawuleza kwabathwali bentsholongwane abonakalisa iimpawu okanye iimpawu.
4. Lukhawuleza kangakanani uvavanyo lweSinocare lweSARS-CoV-2?
Kufuneka kuphela imizuzu eli-15 ukuya kwengama-20.
5. Zindixelela ntoni iziphumo?
(1) Isiphumo esibi: Ukuba kuphela umgca wolawulo lomgangatho (C) ubonakala kwaye imigca yokufumanisa ayibonakali, akukho lori ye-coronavirus antibody eye yafunyanwa kwaye isiphumo sibi.
(2) Iziphumo ezilungileyo: Kubonakala imigca emibini ebomvu. Umgca omnye kufuneka ubekho kwindawo yolawulo (C) kwaye omnye umgca ubekho kwindawo yovavanyo (T) ubonakalisa iziphumo ezilungileyo kuzo zombini ii-antibodies ze-IgG kunye ne-IgM.
(3) Akuvumelekanga: Umgca wolawulo uyasilela ukuvela (Jonga umfanekiso 2). Iziphumo zovavanyo azisebenzi.
6. Ukuba ndifuna okuninzi, ungahlangabezana nemfuno yam?
Ewe sinako ukwandisa imveliso yethu isikali ukuhlangabezana neemfuno zakho, nceda uqinisekise oda yakho kwangaphambili kunye nexesha lethu sokwenza malunga neveki enye.
I-SARS-CoV-2 Strip yovavanyo lwe-Antibody (Igolide yeColloidal Indlela)
1 yehla (10μl) yegazi elipheleleyo / i-serum / iplasma
Imichilo engama-25 / ibhokisi; Imichilo emi-5 / ibhokisi
Gcina ngo-4℃~ 30℃ kwipunch foil, gcina elangeni ngqo, ukufuma kunye nobushushu. Musa ukubanda.